भर्चुअल स्मृति कसरी सफा गर्न, र यो किन गर्नुपर्छ
पीसी प्रयोगकर्ता त्यहाँ स्मृति धेरै प्रकार तर एक छैन भनेर थाहा हुँदैन। हाम्रो बारे प्राथमिक सिलाइ पनि स्कूल मा पहिलो कम्प्युटर विज्ञान पाठ मा राखिदिन। त्यसैले, धेरै परिचालन बाहेक कि सम्झना हुनेछ कम्प्युटर मेमोरी त्यहाँ भर्चुअल स्मृति छ। यो अवधारणा अधिकांश आधुनिक सञ्चालन प्रणाली मा निहित छ। यसको प्रसार कम लागत र यसरी धेरै लाभ व्याख्या गर्न सजिलो छ। आखिर, भर्चुअल स्मृति को प्रदर्शन वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ को CPU कुनै पनि अतिरिक्त लागत बिना। यो के प्रतिनिधित्व गर्छ?
हाल, धेरै कम्प्यूटर राम को एक 32 वा 64 मेगाबाइट प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै कार्यक्रम को साथ कार्यान्वयन लागि catastrophically सानो मात्रा हो। हामी एक पटकमा धेरै कुराहरू गर्न प्रयोग, र यसरी अक्सर संगीत खेलाडी र थप्दा हुलाक सेवा संग ब्राउजर चलाउन, एउटा पाठ सम्पादक। सँगै चलिरहेको, यी कार्यक्रम प्रोसेसर मा ठूलो लोड को हो र राम पर्याप्त छैन। यसको भर्चुअल समकक्ष को सिस्टम मा हुन छैन, यसलाई अनावश्यक प्रक्रियाहरू बन्द गर्न हुनेछ।
निम्नानुसार यस मामला मा भर्चुअल स्मृति को सार छ: कम्प्युटर राम डाटा काममा प्रयोग गरेको छैन, र तपाईँको हार्ड ड्राइभमा तिनीहरूको प्रतिहरू सिर्जना खोजी। यो, बारी मा, माथि थप ठाउँ, नयाँ कार्यक्रम र आवेदन डाउनलोड गर्न प्रयोग गरिने मुक्त हुनेछ। प्रतिलिपि को धेरै प्रक्रिया जो प्रयोगकर्ता पनि शक छैन भन्ने हो, स्वचालित छ। वा विचार आफ्नो कम्प्युटर मा कि स्मृति सय आवेदन को एक जोडी को लागि पर्याप्त हुनेछ। वास्तवमा, भर्चुअल स्मृति हरेक कल प्रदर्शन degrades।
यो अक्सर हुन्छ भने, बस नोटिस गर्दैन कम्प्युटर को मालिकले मिसिन freezes। तर एकदम भर्चुअल स्मृति को स्थिर प्रयोग प्रदर्शन असर गर्न सक्छ। तसर्थ, राम्रो प्रदर्शन को लागि यस्तो महत्त्वपूर्ण अवस्थामा थियो र "राम" को मात्रा हुनेछ। यसलाई पर्याप्त छ भने, त्यसपछि सुस्त कम हानिकारक असर: प्रदर्शन कार्यहरू परिवर्तन गर्दा हामी मात्र एउटा सानो पज हेर्नुहोस्। साथै, प्रदर्शन र गोपनीयता कायम गर्न प्रयोगकर्ता भर्चुअल स्मृति कसरी सफा गर्न जान्नु आवश्यक छ।
जब भर्चुअल स्मृति तथाकथित प्रयोग स्वाप फाइल। यो कम्प्युटर र यसको मालिक बारेमा सबै संकलित डेटा भण्डारण गर्दछ। विशेष खतरनाक भाइरस उहाँलाई सम्म पुग्न सक्दैन रूपमा यो राम्रो जोखिमपूर्ण छ। त्यसैले, खराब नतिजा रोक्न र आफूलाई खतरा बाट जोगाउन, त्यसैले यसलाई भर्चुअल स्मृति कसरी सफा गर्न सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई समय समयमा यो सबै भन्दा राम्रो छ।
भर्चुअल स्मृति Windows XP कसरी सफा गर्न
यो सिस्टम मा, त्यहाँ स्वचालित सफाइ लागि अनुमति दिन्छ, तर सुरुमा यो अक्षम भएको एक सुविधा छ। बाहिर यो निर्मित समारोह फाइदा लिन सबैभन्दा उचित हुनेछ, (अधिक तपाईं यो सबै समय के छ कि) को अरोचक मार्गदर्शन प्रक्रिया पूरा गर्न होइन। त्यसैले, कसरी विन्डोज भर्चुअल स्मृति सफा गर्न।
सुरु गर्न, तपाईं कन्ट्रोल प्यानल मा सुरु-अप मेनुबाट जानैपर्छ। त्यहाँ हामी "प्रशासन" प्रतिमा आवश्यक छ। दुई पटक बायाँ माउस बटन मा क्लिक, एक नयाँ विन्डो खुल्छ। यो ट्याब स्थानीय फेला पार्न आवश्यक छ सुरक्षा नीति , र यो जानुहोस्। विन्डो नाम गरिनेछ "स्थानीय सुरक्षा सेटिङ।" यो नयाँ स्थानीय नीति र सुरक्षा सेटिङहरू चयन गर्नेछ।
यहाँ, ध्यान विकल्प भुक्तान गर्नुपर्छ "बन्द:। खाली भर्चुअल स्मृति पेजिंग फाइल" दायाँ माउस बटन क्लिक गरेर गुण चयन गर्नुहोस्। त्यहाँ केवल दुई स्थान, परिवर्तन समावेश छन् र आफ्नो रुचि बचत गर्नुहोस्। अब हामी भर्चुअल स्मृति कसरी सफा गर्न थाहा छ। यो रहिरहन्छ कम्प्युटर पुनः सुरु (!): को स्वाप फाइल स्वतः खाली गरिनेछ भने परिवर्तन प्रभाव लागि दुई पटक।
विजेट - सुविधाजनक र सजिलो छ।
प्रशासक रूपमा चलाउन आवश्यक? त्यहाँ केही सजिलो छ
म्याक ओएस स्थापना VirtualBox मा: विस्तृत निर्देशनहरू
बीएसओडी - मृत्यु को निलो पर्दा
म विन्डोज 10 अपग्रेड गर्नुपर्छ: सञ्चालन प्रणाली को सुविधाहरू, समीक्षा
पुरुष खतना कसरी
राम्रो पुरानो परम्परा जीवित: एक काठ विवाह मा दिन के
Vorya - रूस को हृदयमा नदी
कसरी दुई औंला संग सीटी र ध्यान आकर्षित गर्न सिक्न?
मिथुन-मानिस, महिला-माछा: रोमान्स
गर्भावस्था को समयमा "Supraks": प्रयोग, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन
छोराछोरीको रूघाँ। उपचार को आधारभूत नियमहरू